Ahalady faha-30 Desambra Fianakaviana Masina - Fihirana Katolika Malagasy
Ahalady faha-30 Desambra Fianakaviana Masina
Daty : 29/12/2007
lanitra ety an-tany
Mamerina ny fiarahabana nahatratra ny Noely.
Tonga nofo ny zanak'Andriamanitra ka niara-nonina tamintsika. Niaina teo anivon'ny Fianakaviana, izay lazaintsika hoe : Masina. Tsy ny hafinaretan'ny fiainana anefa na ny tombontsoa ara-nofo no naha-masina sy naha-sambatra io fianakaviana io.
Henontsika ao amin'ny Evanjely anio ny fidodododoan'i Josefa etsy sy eroa, hatrany Ejipta ka hatrany Nazareta  mba hanavotra ny aim-bady aman-janany, hanavotra ilay "Tompon'ny aina". Tebiteby iainan'ny maro amintsika koa izany, na mety tsy ho aina fofoina loatra satria mety hisongona an'i Eroda, firifiry no milaza fa "Fianakaviana sambatra" (Fisa) kanefa ny famonoan-jaza sy ny famerana ny taranaka no laharam-pahamehana? Ny famerana ny isan-jaza noho ny antony ara-bola ihany mako dia efa fahadisoan-kevitra satria na ny fanabeazana omena izay hany nateraka aza dia mazàva loatra fa ny ara-bola aman-karena no olana.
Tsy izany anefa ho antsika kristianina no ilazana fa sambatra ny fianakaviantsika  fa ny noho i Jesoa miaina eo anivontsika. Raha tsy izay no fahasambarana dia ho zava-poana sy ho fahadisoam-panantenana satria mamitaka ihany.
Mankalaza ny Fianakaviana Masina isika androany dia mazava loatra fa mandalina hatrany ny fankalazana ny Noely : Ilay Famantarana hoa ntsika fa Andriamanitra Emanoela : Miara-monina amintsika , te-hiara-monina amintsika!
Ndeha ary asiantsika fiheverana ny toerana omentsika an'i Jesoa ao amin'ny Fianakaviantsika, ny Vavaka hiarahana manao, na ny aloha sy AORIAN'NY sakafo ihany aza, ho fanombohana. Faran'ny taona rahateo izao ka fanaovana jery todika ny taona manontolo, hahafahana manompana ny hery ho amin'ny tanjona vaovao amin'ny taona ho avy, tanjona iay irariako mba ho fampitomboana ny hasambarana ao an-tokan-trano.
Tsy ho gaga isika raha lasa afobe ny tokantrano, rehefa tsy ao instony ilay "fototry ny fahasambarana", Andriamanitra ilay Fitiavana. Ny fahasahiranana mety hosedraia, toy ny efa nolazaiko, tsy milaza ny tsy fisiany tsy akory. Mety efa nanao ezaka isika nefa tsy nahomby. Mety hifampizara miaraka amin'i Paoly hoe : Mba miezaka sy maniry hanao ny tsara aho nefa ny ratsy ihany no misosoka; tohizo ny filazana miaraka aminy hoe : mahareta isika miezaka, eo am-pibanjinana ny efa niaretan'ny Tompo, satria mbola tsy misy rà latsaka. Mino aho fa ho afaka hilaza aminy koa isika hoe : "Efako ny zavatra rehetra miaraka amin'ilay mankahery ahy".
Dia tohizantsika toy izany ny fankalazana ny Noely : ny fahatsapana fa ny hany antoky ny Fiadanana ho an'ny olombelona dia ny Fanomezam-boninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany
Arahabaina ianao, satria miara-monina aminao ao amin'ny Fianakavianao Andriamanitra. Voaantso koa hiaina Fianakaviana lehibebe kokoa, eo amin'ny Fiaraha-monina sy ny Fiangonana, hahitana ny Endrik'Andriamanitra ao amin'ny olombelona, ka ho voninahitr'ilay Andriamanitra Trinite, satria miorina ao aminy ka afaka manorina fianakaviana mifankatia izay santatry ny lanitra sahady.
 Amin'ity taona A ity dia izay no vakiteny. Ny taona B kosa dia ny faminanian'i Simeona hilaza fa fandavoana sy fananganana ny maro amin'i Israely i Jesoa mba hahalalana ny hevitry ny fo; ny taona D kosa dia i Jesoa tsy hita telo andro : fahasahiranana sy tebiteby avokoa iznay.
 Ho an'ny relijiozy dia tsarovy ny taratasy nosoratan'ny tany Roma hoe : Ankohonam-pirahalahiana hihainana toy ny mpiray tam-po! Fiainan-dRelijiozy toy ny Fianakaviana ; Ny fiangonana Fianakaviana (Sinaody Afrika); ny Taratasin'ny Papa amin'ny taombaovao mbola manamafy izany koa.
< Velona ny Tompo, Aleloia!
Noely 2007 - taona A >
Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.0723 s.] - Hanohana anay